Global Voices teny Malagasy » Ny Zavatra Nampianarin’ny Fikarakaràna Zaridaina Ahy Momba Ny Andraikitry Ny Olom-pirenena Vanona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Oktobra 2014 16:39 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika miora
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Ny Tetezana - The Bridge
Rehefa nandany andro tao an-jaridaiko ao ny herinandro lasa teo, toa tsaroaka ho naniry elatra aho teo am-pieritreretana ny hivoaka any ivelany, hangady tany, hitolagaga manoloana ny fahatsapana fototry ny tany eo amin'ny tànako – amin'ny voalohany. Na ny orana aza tsy hampihemotra ahy hiditra ny trano. Afangaro amin'ny fofona manitr'ireo manga matoy sy ireo voanà kakaô eo amin'ireo hazo manodidina, dia toy ny any an-tranoko aho. Saingy rehefa lasa niha-nankaleo ny fanalàna ireo ahidratsy, dia nanomboka nieritreritra momba ireo zavatra hafa aho: ny heloka mihamitombo , ny kolikoly mandeha ho azy , ny asa fihariana an-jorony  izay araka ny fantatra dia mijoro eo ambonin'ny fivarotana zava-mahadomelina tsy ara-dalàna sy ny fivarotana fitaovam-piadiana .
Tsy mihamaitso hatrany ny bozaka. Be dia be ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny  aty Trinidad sy Tobago, saingy misy maro ihany koa anefa ireo marina  sy tsara  ary manainga fanahy . Indraindray, ny fikisahana mankany aminà vondrom-bozaka iray hafa no fanapahan-kevitra mety, ary indraindray, mila mijanona miady amin'ireo ahidratsy fotsiny ianao, satria tokoa, anao ireo. Nandray anjara tamin'ny fitomboan'ny fakany ianao; noho izany dia tokony andray anjara amin'ny fanalàna azy ireo ihany koa.
Aza misy avela handalo anoloanao na inona na inona. Manana ity ohapitenenana ity ireo Trinidadiana: “Omeo iray santimetatra izy ireo ary haka iray metatra.” Mitady banga fotsiny ireo ahidratsy, sahala amin'ireo olon'ny fiarahamonina mpandika lalàna, mba hitoerany. Amin'ny maha-olom-pirenena mpifidy antsika, mila manara-maso isika : mailo amin'ireo fanimbazimbana ny demôkrasiantsika, mampandre ny feontsika eo amin'ny lafiny politika sy fahaiza-mitantana ary manana rafitra efa mipetraka mba hampandraisana andraikitra ireo mpitondra antsika raha sanatria adinon'izy ireo fa natao hanompo ny tombontsoa iombonana izy ireo, fa tsy ny an'olon-tokana.
Mila mandray ny anjara tandrify azy ny rehetra. Indray andro aho dia namaky lahatsoratra iray momba ny vondrona kely iray hiarahan'ireo mpikarakara zaridaina izay nampivondrona ny fananan'izy ireo noho ny tsy fisian'asa mitombina, ka ifampikarakaran'izy ireo ny zaridainany avy isan-kerinandro. Niroborobo sy nitombo ny zaridainan'izy ireo sy ny finamanany, izany rehetra izany dia noho ny famoronan'izy ireo vondrom-piarahamonina miray hina sy mandaitra. Tahaka izany, tsy maintsy manao izay vitantsika isika rehetra, na inona na inona hakelezan'izany. Afaka manoratra lahatsoratra anaty bilaogy na taratasy ho an'ny tonian-dahatsoratra ve isika? Afaka mandà ny fanekena ny fanaovana kolikoly ho antoky ny fandraharahana ve isika? Afaka manatrika fidinana an-dalam-be, manasonia ireny fanangonan-tsonia ireny, na koa mirotsaka ho mafana fo mpikatroka  ve isika? Tahaka ny voalazan'ilay Keniana mpahay tontolo iainana Wangari Maathai  tanatin'ny lahatsoratra mandona nosoratany, “I will be a hummingbird” (Ho lasa Tsikiririoka aho) , afaka manao zavatra isika rehetra. Ary hifanampy hanome zavatra iray lehibe kokoa ireo ezaka kely tsirairay ireo, zavatra iray izay tena hitondra fanovàna tokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/10/18/62998/
 ny heloka mihamitombo: https://globalvoicesonline.org/2014/05/05/silence-will-not-solve-trinidad-tobagos-crime-problem/
 ny kolikoly mandeha ho azy: https://globalvoicesonline.org/2014/07/21/trinidad-tobago-military-searches-kayode-thomas-killer/
 asa fihariana an-jorony: https://globalvoicesonline.org/2014/05/21/video-on-murder-and-corruption-in-trinidad-goes-viral/
 fivarotana zava-mahadomelina tsy ara-dalàna sy ny fivarotana fitaovam-piadiana: https://globalvoicesonline.org/2014/01/22/major-us-drug-bust-forces-trinidad-tobago-to-confront-parallel-economy/
 zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny: https://globalvoicesonline.org/2014/04/23/video-of-abuse-disguised-as-discipline-goes-viral-in-trinidad-tobago/
 manainga fanahy: https://globalvoicesonline.org/2014/03/01/a-quick-guide-to-trinidad-tobago-carnival/
 manara-maso isika: https://globalvoicesonline.org/2014/07/18/improper-land-allocation-harms-trinidad-tobagos-public-interest/
 mafana fo mpikatroka: https://globalvoicesonline.org/2014/05/07/trinidad-tobago-an-argument-for-gay-rights/
 I will be a hummingbird” (Ho lasa Tsikiririoka aho): https://www.youtube.com/watch?v=IGMW6YWjMxw